Maxkamada dambiyada culus & tan darajada 1-aad ee Bossaso oo ay ka socdaan dacwado la xiriira burcad badeednimo, dambi dil ah, iyo eedayn qarax. – Radio Daljir
Diseembar 5, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Dec 05 – Xeer ilaaliyada maxkamada dambiyada culus ee magaalada Bossaso Bashiir Cabdi Garas ayaa ka xog warramay dambiyada culus ee maxkamada hor yaal ee uu gar-naqsigoodu socday muddada. Qareen Garas oo ka hadlay dacwadaha ay maxkamaduhu hadda dhegaysteen ayaa xusay in ay jiraan 3 kiis oo waaweyn oo horyaal maxkamada rafcaanka ee dambiyada culus, iyo tan darajada 1-aad ee Bossaso.
Waraysi: [Dhegaysi …]
3-da kiis ayaa kala ah:
a) Maxkamada rafcaanka ee Dambiyda Culus:
1) Rag burcad badeed ah oo markab laga lahaa dalka Pakistan ku afduubay xeebta Caluula, dilayna naakhuudihii markabka; 7 burcad badeed ah ayaa dacwadoodu socotaa.
b) Maxkamada Darajada 1-aad:
2) 2 nin oo darawallo ah oo ku shaqaysanayey gaari iska-roga ah, kana ganansan jiray ciidda, oo ku dagaalamay duleedka Bossaso, mid ka mid ahina uu dhintay; gacan ku dhiiglihii ayaa maxkamada saaran, iyo
3) Nin lagu soo eedeeyey in uu mas’uul ka ahaa qunbulad gacmeed lagu tuuray ciidanka birmadka ee magaalada Bossaso, uu dilay mid ka mi ah ciidanka, uuna dhaawacay 9 ka mid ah 23-kii July 2010.
Md. Garas waxaa uu sheegay in maxkamada rafcaanka ee dambiyada culus iyo tan darajada 1-aad ee Bossaso ay labaduba dhegaysteen gar-naqsigii, deetana xukunkii uu dhici doona Arbacada, 8-da bisha December.
Md.Garas ayaa ah xeer ilaaliyaha maxkamada dambiyada culus, ahna ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamada darajada 1-aad ee magaalada Bossaso.